Jan. Jaamac Maxamed Qaalib oo iska casilay xilkii uu u magacaabay Madaxweyne Farmaajo – Balcad.com Teyteyleey
Jan. Jaamac Maxamed Qaalib oo iska casilay xilkii uu u magacaabay Madaxweyne Farmaajo
Jan. Jaamac Maxamed Qaalib ayaa iska casilay xil uu dhowaan u magacaabay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) u magacaabay kaddib markii ay ka soo wareegatay magacaabistiisa muddo ka yar 24-saac.
Janaraalka oo loo magacaabay Guddoomiyaha guddiga taakuleynta ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in xilkaasi aanu kala tashan Madaxweyne Farmaajo, sidaas darteed uu iska casilayo xilka loo magacaabay.
Is casilaadda Guddoomiyihii guddiga taakuleynta ciidamada Qaranka Jan. Jaamac Maxamed Qaalib ayaa is casilaadisa ku sababeynin marka laga reebo inaan lala tashan, isagoona sheegay in xilkaasi loo magacaabo cid kale.
Dhinaca kale is casilaadda Jan. Jaamac Maxamed Qaalib ayaa noqoneysa mid dhabar jab weyn ku ah howlaha lagu taakuleynayo ciidamada oo Madaxweyne Farmaajo uga dhawaaqay munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee Baarlamaanka 10-aad.
The post Jan. Jaamac Maxamed Qaalib oo iska casilay xilkii uu u magacaabay Madaxweyne Farmaajo appeared first on Ilwareed Online.
Xildhibaano beeniyay inay wadaan Mooshin ka dhan ah Raiisal Wasaare Khayre
Wararkii ugu danbeeyey: Qadar oo laga Digay talaabo militari, Trump wajigabaxnimo